ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကြီးက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုတောင်းဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မမျှတ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးတွေ သန့်ရှင်းမျှတဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို တောင်းဆိုရမလဲဟင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဗမာစာ သည် ..ဒို့စာ
Dying millionaire doctor’s feeling about his life »
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကြီးက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုတောင်းဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မမျှတ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးတွေ သန့်ရှင်းမျှတဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို တောင်းဆိုရမလဲဟင်
မဟာပညာရှိ ဂျာရစ် (သရော်စာ)
အောက်တိုဘာ ၁၇ ၊ ၂၀၁၄ M-Media
۩ ဂျာရစ်ခင်ဗျား – မနေ့တစ်နေ့က ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဥက္ကဌကြီးသူရဦးရွှေမန်း အဖြေစကားကို နာကြားလိုက်ရတယ်။ ရုပ်သံဌာနရဲ့မေးခွန်းက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင် ထားသလဲ၊ နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလားပေါ့ဗျာ။ အံမယ် … ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဌ အဖြေကြားရတော့ တာမထွက်ခင် ကတည်းက ပန်းဝင်နေပါ ကလားလို့ပဲ မှတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။ ပြင်ဆင်တာ တော်တော် ခရီးရောက်နေပြီတဲ့။ နိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။ ကျနော်သာ သူ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အနိုင်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဘာညာ မယုတ်မလွန်ဖြေမိမှာပဲ။ ခုကျတော့ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲနေသလိုပဲ။ ဂျာရစ်ရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဂျာရစ်ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုပဲ ပြေးမြင်မိ ပါတယ်ကွယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပြီးသား ဆိုတော့ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲမယ်ဆိုလည်း လွန်ကဲလို့ ရတာပေါ့နော် …. နော်လို့။
۩ ၄၃၆ တွေ၊ ပီအာရ်တွေ လှုပ်လှုပ် ခတ်ခတ်ဖြစ်မယ် ကြံရုံရှိသေး စမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်တဲ့သတင်းက ရွှေရောင် နဂါးတွေရော၊ နတ်တွေရော၊ ပရလောကသားတွေရော စုံစုံညီညီနဲ့ကို သတင်းတွေမြိုင်ဆိုင်ခဲ့ ပါရောလား။ လူထုက နိုင်ငံ့ အရေးထက် ခေါင်းလောင်း အရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြသဗျ။ ခုလည်း လာပြန်ပြီဗျို့။ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးစေရ။ ၂၀၁၅ က နီးသထက်နီးလာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးက ထင်သလို ခရီးမပေါက်၊ တိုက်ပွဲတွေ ကပြန်ဖြစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်က မကြေမလည်။ အဲဒီလိုအခါမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းက လူသတ်တရားခံဆိုတဲ့ မြန်မာနှစ်ဦးရဲ့အဖြစ်က လူထုစိတ် အ၀င်စားဆုံး ထိပ်တန်း သတင်းဖြစ်လာပါလား။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်မက တရုတ်၊ မလေး၊ အင်ဒို၊ စင်ကာပူတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အဖမ်းခံ၊ အရိုက်ခံ၊ အနှိပ်စက်ခံ၊ အသတ်ခံရပေါင်းစွာ များလှပြီ။ နိုင်ငံတော်က အကာအကွယ်မပေး၊ ကိုယ့်ထိုက်ကိုယ်ခံ ပစ်ထားခဲ့ရာ အခုကျတော့လည်း ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွေရော၊ အထူးအဖွဲ့တွေရော၊ သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို တောင်းဆိုတာတွေရော လုပ်ပြလှချည်လားဗျ။ ထူးထွေတည်အံ့ရာသော် ဆိုရမလို ခေါင်းလောင်းကြီးနေရာအစားဝင်တဲ့ သတင်းလေများလားလို့လည်း တွေးမိသဗျ။
ခေါင်းလောင်းကြီးတုန်းက အစိုးရက တမင်ဖန်တီးတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေ ရှိသလို တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခု လိပ်ကျွန်းဖြစ်ရပ်က ဦးဂျာရစ်အမြင်ပြောရရင် တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။
အဲဒီတိုက်ဆိုင်မှုအပေါ် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်သွားတာကတော့ လက်ရှိ အစိုးရပါပဲ။ ဟိုးအရင့် အရင်တုန်းကလို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်တိုင်း ဘယ်ပြည်မှာ ကျီးထိုးထိုး လောက်ကိုက်ကိုက် ပစ်ထားဖို့ဆိုတာက ၂၀၁၅ နီးလာပြီဆိုတော့ မလျော်ဘူးလေကွယ်။ ဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကြောင့်မို့ ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွေ၊ အထူးအဖွဲ့တွေ အတွက် အထူးအထွေ အံ့သြတော်မူပါနဲ့လား။ ခေါင်းလောင်းကြီးနေရာမှာ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သတင်းက အစားထိုး ၀င်လာတာလည်း အမှန်ပါပဲဗျာ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆိုတော့လည်း စိတ်ဝင်စားရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ဂျာရစ်ပြောပါရစေ။
۩ ဂျပန်က ထိုင်းသံရုံးရှေ့မှာ ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု အမှန်အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ ဆန္ဒပြကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လာတော့ လိပ်ကျွန်းအရေး ထိုင်းသံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြဖို့ကို ခွင့်မပြုဘူး။ ဂျပန်မှာပြ ခွင့်ရပြီး မြန်မာမှာ ဘာလို့ပြခွင့်မရတာလဲရှင်။ ဦးဂျာရစ်ပြောပြပါဦး။
ဟဲ့…ဟဲ့…ဂျပန်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက အာဏာရှင် ဖက်ဆစ်စနစ်အောက်က လွတ်ခဲ့တာလေ။ တူရာ တန်ရာ နှိုင်းစမ်းပါကွယ်။
۩ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို သတ်လို့ဆိုပြီး တရားစွဲခံထားရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားနှစ်ဦး အတွက် သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို တောင်းဆိုခဲ့သတဲ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အပေါ် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် သာဓု ခေါ်မိပါတယ်။ သြော် … ဒါနဲ့ မသိလို့မေးပါရစေ။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကြီးက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုတောင်းဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မမျှတ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးတွေ သန့်ရှင်းမျှတဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို တောင်းဆိုရမလဲဟင်။
ဗုဒ္ဓေါ … သမိန်ပေါသွပ်လိုပဲ အော်လိုက်မယ်။ ရယ်ရတယ်ဟေ့….ဗြဲ…..။
This entry was posted on October 17, 2014 at 7:38 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.